G | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » G
Posted by alinsett on Mar 22, 2016 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., My Dear Diary | 19 comments
Thint Aye Yeik's Creation စကားလုံးများကို တို့ထိခြင်း
G = Grasp
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကြိုးငါးပင်သာ ရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အရောက်မှာတော့ . . .
နောက်ထပ် ကြိုးတစ်ပင် ပိုတိုးပြီး ကြိုးခြောက်ပင်တိတိ ရှိသွားပြီ။
ထိုကြိုးများသည် ကျွန်တော့်အား တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် တိုးကာ ရစ်ပတ်တုတ်နှောင်ထားသော ကြိုးများဖြစ်သော်လည်း
”မောင်သူရရေ မင်းကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲ့ဒီကြိုးတွေရဲ့ နွယ်ငင်ရစ်ယှက်မှုကို လိုလားနှစ်သက်နေတယ်မဟုတ်လား”ဟု အသင်မေးလျှင်. . .ကျွန်တော် မငြင်းဆိုချင်ပါ။
အဲ့ဒါ သိပ်တော့ မကောင်းပါ။
”လောကမှာ ရှိရှိသမျှ ချစ်ခင်နှစ်သက် မက်မောစွဲလမ်းရာဟူသမျှသည် တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တွင် ကွေကွင်းပြတ်စဲပြီး ထားရစ်ခဲ့ရမည်”ရယ်လို့
သေချာနေပါလျက်နှင့်. . .
တကယ်တော့. . . အဲ့သည်ကြိုးများ(တစ်ပင်ချင်းသော်လည်းကောင်း၊ လေးငါးခြောက်ပင်ပြိုင်၍သော်လည်းကောင်း) ရစ်ပတ်တုတ်နှောင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိဘဲ ကိုယ့်တစ်ကိုယ်စာရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်သာ နေလိုက်ချင်သည့်စိတ်လည်း ဖြစ်မိသည်ပဲ။ အထီးကျန်သည်ဟု ဆိုချင်ဆိုပေါ့။
သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်စုံတစ်ယောက်(သို့မဟုတ်-အယောက်ခပ်များများ)ကို တွယ်တာကျွမ်းချစ်ပြီး သူ(တို့)မရှိလျှင် မဖြစ်တော့သလိုမျိုး ကပ်ငြိနေရခြင်းထက် တစ်ကိုယ်တည်း အေးအေးလူလူ အထီးကျန်ဆန်နေရခြင်းက ပိုကောင်းတတ်ပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အထီးကျန်ဆန်တယ်လို့ မဆိုသာသော ”တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြင့် နေထိုင်ခြင်း”အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်နိုင်သည် မဟုတ်လား။ (ဒါမှမဟုတ်လည်း အထီးကျန်ဆန်ရတာကို ကြိုက်တယ် လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောရုံပေါ့)
ဆိုလိုတာက. . .
လူတစ်ယောက်၏ သက်ရှင်နေထိုင်မှုကိစ္စထဲမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာတွေထဲက လုပ်သင့်တာတွေကို ရွေးလုပ်နိုင်ဖို့ရာ. . .ပြီးတော့. . . ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မှာကိုယ် မတ်မတ်ရပ်တည်ဖို့ရာ. . . အလုပ်အကိုင်တစ်ခုနှင့် ကိုယ်ဝါသနာပါရာ စိတ်ဖြေနည်းတစ်ခုခု အဆင်ပြေစွာရှိနေလျှင် ပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလို့ ထင်မြင်ယူဆမိခြင်း ဖြစ်သည်။
အဲသည်ထက်ပိုလာသော တခြားအရာတွေဟာ အပိုစာသားတွေပဲ မဟုတ်လား။
အသက် ၂၉ ပြည့်ခါနီးလေလေ. . .
သည်လူဟာ အတ္တတွေတစ်ထပ်ချင်းစီ ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပြီး ညစ်ထေးရင့်ရော်လာလေလေ. . .
စာရေးဆရာတစ်ယောက် ပြောဖူးသည့်စကားကို ပြန် အမှတ်ရစရာဖြစ်သည်။
”လူဟာ မွေးကင်းကစနေ တဖြည်းဖြည်း အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ငယ်စဉ်တုန်းက ဖြူစင်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသားလေးဟာ . . .
အတ္တတွေ မာနတွေ လောဘတွေ တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် ဖုံးလွှမ်းခံလိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ဒီ အတ္တတွေ မာနတွေ လောဘတွေကို တစ်လွှာချင်း ပြန်ခွါချပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေးတွေ ပြန်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်”တဲ့။
သည်တော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ အတ္တတွေ မာနတွေ အလိုလောဘတွေသာမက ကျွန်တော့ကို ရစ်ပတ်တုတ်နှောက်နေသည့် ကြိုးများကိုပါ ခွါချ ချန်ရစ်ခဲ့လိုက်ချင်ပြီ။
ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဖြူစင်သည့် နှလုံးသားကလေး ပြန်ဖြစ်သွားဖို့ဆိုတာထက် လေးပင်နေပြီဖြစ်သော ထိုအရာများကို ဆက်လက် သယ်ပိုးမထားချင်တော့သည့်စိတ် ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆရာ တာရာမင်းဝေ၏ ခေတ်နေအတွက် စာတစ်ရွက် ဆိုသည့် စာအုပ်ကလေးကို ဖတ်မိရာ တစ်မျက်နှာအရောက်မှာတော့ . . ”Grasp”ဟူသော စကားလုံးလေးအကြောင်း အတော်အတန် တွေးတောမိသွားသည်။
ဆရာတာရာမင်းဝေက ”အားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်တာဟာ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတာပါပဲ” ဆိုသည့်သဘောတရားအကြောင်း ပြောသွားသည်။
ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားသည်။ လက်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည့်အရာတွေကြောင့် အခြားအရာတွေကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသည် မဟုတ်လား။ တမ်းတမ်းစွဲကာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိသောအရာတချို့ကြောင့် တချို့သော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ဒါဖြင့် ဘာကြောင့်များ အပိုစာသားတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားဦးမလဲ။
ထိုအတွေးများဖြင့် ရီဝေလွင့်မျောအပြီးမှာတော့. . .
ကျွန်တော် ဖမ်းဆုပ်ထားမိသော အရာများစွာထဲမှ လွှတ်ချသင့်တာမှန်သမျှ လွှတ်ချပစ်ဖို့ သတ္တိ မွေးယူမိပါတော့သည်။ ထို့နောက် ကြိုးခြောက်ပင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကြည်လက်သောအမြင်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုကြိုးများနှင့်ကျွန်တော် အပြန်အလှန်ရစ်ပတ်တုတ်နှောင်နေမိသည့်အဖြစ်ကိုလည်း လွတ်မြောက်စေရမည်။
ပထမဦးစွာ ထိုကြိုးများကို ကိုယ့်ဖက်က ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းအား တစ်ကြိုးချင်း တစ်စချင်း လွှတ်ချမည်။ ကိုယ့်ဘက်က လွတ်သွားသောအခါ သူတို့ဘက်က ပိုတင်းချင်လည်း တင်းလိမ့်မည်။ သူတို့ဘက်က လျော့ချင်လည်း လျော့သွားပါလိမ့်မည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်းကျပ်တုတ်နှောင်နေကြတာထက်စာလျှင် လွတ်မြောက်ချောင်လည်နေတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါသည်။ အားလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ထားတာဟာ
လေးစားစွာ. . .
Thint Aye Yeik @ Maung Thura
.သေခါနီး လူမမာတစ်ယောက်ကို တို့ဗမာတွေ ပြောတတ်တာ ၂မျိုး ရှိတယ်။
”နောက်ဆံတင်း မနေနဲ့. . .စိတ်ချ ခဲ့ သိလား” (လွှတ်ချစေလိုခြင်း)ရယ်. . .
”အောင်မယ်လေးးးးး ထ ကြည့်ပါအုန်းတော့လား. . .ရှင့်ကလေးတွေ ရှင့်အကြွေးတွေနဲ့ကျမကို ဒီအတိုင်းထားခဲ့တော့မှာလား တော့်”
အဲ့၂ခုထဲက ဘယ်ဟာက အကျိုးပြုတယ်လို့ သဂျီးထင်သလဲ
ဘယ်တခုမှ အကျိုးမပြူဘူး..။ နောက်ဆံတင်းမနေနဲ့လို့ဆိုတာဟာ.. နောက်ဆံတင်းစရာရှိနေတာကိုသတိပေးသလိုဖြစ်တတ်ပြီး..
အကြွေးတွေနဲ့ဆိုတာဟာလည်း.. သေမယ့်သူကို ..နောက်ဆုံးအချိန်ဒုက္ခပေးတာပဲ…။
သေခါနီးလူနာတယောက်ကို.. သူစိတ်ချမ်းသာစေဖို့တခုထဲ ရည်ရွယ်လုပ်ရပြောရမယ်..။
အပေါ်က.. Grasp all, lose all ကို
“အားလုံးကိုဆုပ်ပြတာဟာ.. အားလုံးကိုပုတ်ချတာပဲဖြစ်တယ်”လို့.. ဆရာတာရာမင်းဝေ သူ့ဒဿနနဲ့တူဘာသာပြန်ထားတာသာဖြစ်ပါတယ်..။ မူရင်းဆိုလိုချက်နဲ့ တော်တော်လွဲတယ်..။
In English: Grasp all, lose all. — This isawarning not to be greedy and try to get everything.
one who wants everything, may lose it all
In Italian: Chi troppo vuole nulla stringe. — Who wants too much, will not get anything. It is used to give an advice toaperson who wants always too much.
တာအိုဝါဒဖခင်.. လောင်ဇူးကတော့..ဆုပ်ကိုင်တာနဲ့ပါတ်သက်လို့.. အောက်ကအတိုင်းပြောခဲ့တယ်..။
ဇမ်ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ …. ဒီလို…
ကဲ… ဖွပေးလိုက်ပြီ.. တွေးပေတော့….။
ဘယ်စကားမဆို သာမာန် လူ လူမှုရေး လိုတွေးတာနဲ့
ဘာသာရေးနွယ်ပြီးတွေးတာနဲ့ တူမှ မတူပဲဂျာ…!!
လူမှုရေးး ဘက် က ပြောရအောင်..!!
ဟိ.. ပို့စ်တော့ ပျက်တော့မယ်…
ကိုယ် ဆုတ်ကိုင်ထားးတဲ့ အရာဟာ
ကိုယ့်ကို အပေါ်ရောက်စေမယ့် အရာလားး
အောက်ဘက် ဆွဲချမယ့် အရာလားး တော့ သိဖို့ အရေးးကြီးးတာပေါ့..
အားလုံးကို လောဘတကြီးး နှောင်တဲ ထားဖို့ မဖြစ်သလို အားလုံးးလွှတ်ချရမယ်တော့ ဘယ်ဟုတ်မတုန်းးး
ကိုယ့် ဘဝပေးး မခြေအနေနဲ့ ဘာကို ဆုတ်ကိုင်ထားးရမယ်, ဘယ်အရာတွေ လွှတ်ချရမယ် ဆိုတာ သိပေါ့..!!
အာ့ကြောင့် ဗုဒ္ဒ က မဇ်ဇိမ ပဋိပဒါ (စာလုံးပေါင်း သည်းခံဘာ) ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ နေမယ်။
ရှိသမျှလဲ မလွှတ်ချ နဲ့ တွေ့ရာမြင်ရာလဲ လိုက်ဆွဲမနေနဲ့ လို့
ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တာ ထိုက်တန်တာ ကိုယ့်ကို အကျိုးပြုမှာ ဆိုရင် ဆုပ်ကိုင်ထား
ကိုယ်နဲ့လဲ အဆင်မပြေ ကိုယ့်ကိုလဲ အကျိုးမပြုတာမျိုးတွေ ကျတော့ လွှတ်ချလိုက်တတ်ဖို့ လိုတယ်။
တော်၏ မတော်၏ ဘယ်လို သိမလဲတော့ လာမမေးနဲ့
အဲ့ဒါက ကိုယ့်အသိဥာဏ် နဲ့ ကိုယ် စဉ်းစားရတာမျိုးး)
(လောကီ ရော လောကုတ္တရာ ရော သုံးလို့ရတယ် ဟုတ်?? )
ဟုတ်ပါ့..။ ဘယ်အရာမှ ပုံသေမရှိ.. ကံ..ကံအကျိုး… ဟိုဖက်ကကံ..အလုပ်ကိုကြည့်ပြီး.. ဒီဖက်က… ထိုက်သင့်သလိုတုံ့ပြန်ရမယ်…။ တုံ့ပြန်ရမှာ.. အစွဲကင်းနိုင်သမျှကင်း.. မဇ္ဈိမပဋိပဒါလေးနဲ့…
ဦးလေးရေ ဦးလေးရဲ့ ကြိုးခြောက်ပင်ဆိုတာ တွေးနေတာ။ လူ့ဘ၀မှာ အဲဒီကြိုးတွေ မရှိတော့ရင် ဘ၀ရဲ့ ဂုဏ်ရည်ဟာလည်း ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီလောက်လှတဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေဆိုတာ ထိုက်မှ ရတာပါ။ မ်ိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ထိုက်မှ ရသလို မိသားစု သံယောဇဉ်ဆိုတဲ့ ကြိုး တွေဟာလည်း ထိုက်မှရတာ။ တကယ်တော့ ဦးလေး ဟာ ကံကောင်းတဲ့လူဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မသိသေးဘူး ။
အဲ့ဒီ ကြိုးတွေက ကျနော့်ကို ၂၉ နှစ်လူံးလုံး တုတ်နှောင်နေတာ
ကျနော့်မှာ. . .ကြိုးတွေ တင်းလွန်းလို့ ရထားတဲ့ဒဏ်ရာတောင်မှ အတော် နက်နေပြီ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဘာကြိုးမှ အတုတ်နှောင်မခံဘဲ နေကြည့်လိုက်ချင်တယ်လေ
ဘာတဲ့ ဘဝတဏှာ ဆိုလား
တခါတလေ.. လူတစ်ယောက်ဆုပ်ကိုင်သင့်တဲ့အရာက တခြားလူတစ်ယောက်အတွက် လွှတ်ချသင့်တဲ့အရာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်….။
တခါတလေကျတော့ လက်ထဲရောက်လာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေထဲကနေ ရွေးချယ်က ခက်ခဲပြန်ရော့…
.အင်းလေ. . . ထောင့်ပေါင်းများစွာက တွေးလို့ရနေမင့်
.လောလောဆယ် သဂျီး နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးကို နှုတ်ဖို့ ရယ်ဒီ ကိုင်ထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ်
သူကြီး မအားလောက်ဘူး။ ဒါက သူ့ သဒါဇင်း ဖောင်ပိတ်ရက်